नेपालमा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुने उमेर समूहकै धेरै संक्रमित « Online Rapti
नेपालमा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुने उमेर समूहकै धेरै संक्रमित
काठमाडौँ : कोभिड–१९ को संक्रमण नेपालमा रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको उमेर समूहमा थोरै देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले समुदायमा संक्रमण नदेखिएकाले जोखिममा रहेको समूह जोगिएको बताए । उक्त समूहमा संक्रमणको व्यापक विस्तार भए मृत्युदर बढ्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
नेपालमा मृत्यु भएका पन्ध्रौं व्यक्तिमा मधुमेह, रक्तचापको समस्यासँगै ज्वरो र निमोनियासमेत देखिएको थियो । ती व्यक्ति पुरुष थिए । कोभिड–१९ ले निको हुने दर बुधबार १५ प्रतिशत पुगेको छ । संक्रमण दिनहुँ तीव्र गतिले बढेकाले निको हुने दर कम देखिएको हो । यही गतिमा संक्रमण विस्तार जारी रहे समुदायमा फैलिन सक्ने डा. पाण्डेले बताए ।